Somaaliyaa: Hogganaan al-Shabaab du'eera jedhame lubbuun jiraachuun himame - BBC News Afaan Oromoo
Somaaliyaa: Hogganaan al-Shabaab du'eera jedhame lubbuun jiraachuun himame
Hogganaan hidhattoota garee al-Shabaab bara darbee baatii Waxabajjii keessa dhukkuba kaansariitiin du'uunsaa himamee ture, amma lubbuun jiraachuun himame.
Ogganaan garee riphee loltoota Somaaliyaa Ahimadi Diiriiyyee erga du'unsaa himamee waggaa tokkoon booda, ergaan sagalee amma gadhiifamee akka lubbuun jiru kan agarsiisuu ta'uu ibsameera.
Waraabbiin sagalee karaa kutaa saba himaa garee Al-shabaabiin gadhiifame kunis, dheerina daqiiqaa 20 kan qabu yoo ta'u, qorannoo gaggeeffameen sagalichi jidduu baatii Hagayyaafi Fulbaana bara kanaa (2019) jidduutti kan waraabame ta'uunsaa akka hinollee himameera.
Ogganaa garee al-Qaa'idaa waliin walitti dhufeenya kan qabu kan gareen al-Shabaabikan ture Ahimad Abdii Godaanee, haleellaa xiyyaaraa waggoota shaniin dura Ameerikaan gaggeeffameen ajjeefamuun walqabatee aangoo oggansaa kan fudhatan Ahimad Diiriiyeen, ergaa sagalee dabarseen matadureewwan garaa garaa irratti wayita dubbatu dhagahameera.
Kaayyoon ergaa sagalee cimina qabu kanaa inni guddaan namtichi lubbuun jiraachusaa himuuf kan kiyyeefamuun qophaa'e ta'usaa himameera.
Ogganaan garee Isilaamummaa Ahimad Diiriyeen gaheessa umuriin naannoo 40tti tilmaamamu yoo ta'u, ergaa sagalee amma dabare kana keessattis waa'ee ajjeechaa al-shabaabii kantiibaa Moqaadishoo irratti raawwate, fi waa'ee filannoo morkisiisaafi dhiheenya kana Jubaalaandiitti gaggeefameeskaaseera.
Kana malees, ogganaan garee kun waa'ee wal dhabdee daangaa galaanaa Somaaliyaafi Keeniyaa jiduutti umameefi dhiheenyatti mana murtii idil addunyaatti dhiyaachuun dhagahamu irrattis al-shabaabii murtee manni murtii biyya alaa kennuu akka hinfudhannee ibseera.
Waggoota muraasaan asi garee hidhataa kunis loltoota gamtaa Afriikaafi motummaa Somaaliyaatiin magaaloota biyyattii gurguddoo keessaa dhiibamuun kan baafame yoo ta'u, magaalootaafi eddoowwan biraatti halleellaa qaqabsiisuurraa ittifamu hindanda'amne.
Waraanni Somaaliyaa irra jireessaa xiyyaara nama -maleessa Ameerikaatiin deegaramuus dhiheenya kanan gare kanarratti naannoolee Kibbaa fi jiddugala biyyattii keessatti duula olaanaa jedhamuu gaggeessuu eegaleera.
'Doorsiisni sun doorsisa ministira muummee tokkorraa hin eegamne'